MK-677 (Ibutamoren) miyuu si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Muscle? Dib u eegista Sarm
Miyuu MK-677 (Ibutamoren) si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Murqaha? Dib u eegista Sarmarka [CUSUB]
/blog/Gallery/Miyuu MK-677 (Ibutamoren) si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Murqaha? Dib u eegista Sarmarka [CUSUB]
Posted on 09 / 29 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
1.Waa maxay MK-677 (Ibutamoren)?
Budada MK-677 (Ibutamoren) budada (159752-10-0) waa hormoonka koritaanka cusub ee loo yaqaan 'secretagogue (GHS). Qormada hormoonka koritaanka waa xarun loogu tala galay in ay u shaqeyso sida xog hagitaan si looga caawiyo kor u qaadida heerarka hoormoonka. Hormoonnada koritaanka ayaa looga baahan yahay jirkaaga inuu sifiican u shaqeeyo. Tani waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad kor u qaaddo koritaanka unugyada muruqyada.
Budada MK-677 (Ibutamoren) kuma faragalinayso howlaha kale ee jir ahaaneed iyo nafleyda sida soosaarka hoormoonka dabiiciga ah. Tan waxaa looga jeedaa waa inaad la kulanto kororka heerarka hoormoonka adiga oo aan la kulmin waxyeellooyin sida xakamaynta testosterone. Faa'iidooyinka dhisidda jirka ee MK 677 waa badan yihiin laakiin waxaan ka wada hadli doonnaa dhammaantood goor dambe maqaalkan.
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee budada MK677 (Ibutamoren).
2. Muxuu MK-677 (Ibutamoren) u leeyahay magac ka duwan?
Ibutameron waxaa sidoo kale loo yaqaan mk677 nutrobal, Ibutamoren Mesylate dadka qaarkiisna waxay u tixraaci karaan MK 677 (Ibutamoren) sarm bud. Magacyadan oo dhan waxaa loola jeedaa isku xarun. Tani waa sababta oo ah dadka qaarkiis waxay suuqyada ugu iibiyaan xarun sidii sarmir laakiin khubarada qaar ayaa sheegaya inaysan ka tirsanayn qoyska dhifashada.
Ibutamoren sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inay tahay daawo qaas ah maxaa yeelay waa dhif in la helo daawo leh awood u leh inay kiciso heerarka hoormoonka koritaanka iyo IGF-1 (Insulin-sida koritaanka factor).
3. Sidee ayuu u shaqeeyaa MK-677 (Ibutamoren)?
Budada MK-677 (Ibutamoren)159752-10-0) nutrobal wuxuu shaqeeyaa isagoo kordhinaya sirta hoormoonka koritaanka (GH) iyo qodobada koritaanka-1 (IGF-1) .Waxaan ku gaadhayaa tan anigoo ku dayaya sida howre hoormoonka ghrelin. Ghrelin waa hormoon si dabiici ah u dhacaya haddii aadan waligaa hore u soo marin.
Tani waxay awood u siineysaa inay si sahal ah ugu xidho mid ka mid ah heesaha GHSR (ghrelin receptors) maskaxda. Mar haddii la kiciyay, qaabilayaasha ghrelin ayaa markaa dhaqaajisa soosaarka hoormoonka maskaxda. Waxay u shaqaysaa sidii neuropeptide-ka CNS (nidaamka dareemayaasha dhexe). Hormoonkan wuxuu caan ku yahay awooddiisa si uu u kicinayo rabitaanka cuntada.
Waxay kaloo nidaamisaa qaybinta tamarta ee jirkeena waxayna sidoo kale saameyn ku leedahay habka jirku u qodayo dufanka. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa awoodda jirku inuu ka soo kabto xaalado ay ka mid yihiin buurnaanta iyo nooca Sonkorowga 2.
Markii loo adeegsado kaligiis, mk 677 waxay leedahay awood ay ku kordhiso wax soo saarka HGH iyada oo aan la carqaladeyn hormoon kale. Qaar badan oo ka mid ah kuwa qaata ayaa sidoo kale ammaanaya mk 677 dheelitirka sababta oo ah ma xakameynayaan heerarka jira ee testosterone iyo hormoonnada koritaanka, taas oo ah gunno weyn haddii aad tixgeliso faa'iidooyinka.
4. Faa'iidooyinka MK-677 (Ibutamoren)
Koritaanka Murqaha iyo Soo kabashada
Mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee mk 677 waa kobcinta murqaha iyo soo kabashada. Maaddaama mk 677 dheeri ah uu kordhiyo heerarka IGF-1 iyo GH isticmaale ayaa saami kara cabbir badan si fudud. Tan waxaa taageeray cilmi baaris iyo saynis. Daraasadaha la sameeyay waxay muujiyeen koror weyn oo ku saabsan murqaha mussalka gaar ahaan dadka qaba hoormoonka koritaanka hormoonka iyo ragga da'da ah gaar ahaan 60 sano iyo wixii ka sareeya. Faallooyin badan oo mk 677 ah oo laga helo dadka isticmaala ayaa sidoo kale soo jeedinaya in daroogadani ay leedahay natiijo wax ku ool ah oo ku saabsan dhismaha unugyada muruqyada.
Markay nabarreyso, cufnaanta lafaha ayaa yaraata. Dad badan oo da 'ah ayaa ku xanuunsada lafo-xanuun iyo osteoporosis oo keena dhaqdhaqaaq la'aan iyo xanuun la'aan. Qaar ka mid ah carruurta iyo dhallinta waaweyn ayaa waliba taas la gudbi kara laakiin waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay cufnaanta lafaha oo hoos u dhacay. Dheeraadka budada ah ee MK-677 waxay kicisaa hormoonka korniinka oo taa badalkeedana wuxuu dhaqaajiyaa isbedelka lafaha Taasi waa sida daroogada ay awood u leedahay inay ka caawiso xoojinta lafaha.
Waxay ka hortagtaa Murqaha
Daraasad cilmi baaris cilmi ah oo lagu sameeyay sideed qof oo sooman, Ibutamoren mk 677 wuxuu awood u yeeshay inuu ka laabto murqaha lumay iyo luminta borotiinka. Daraasad kale ayaa caddeysay in daroogadu ay sidoo kale caawisay bukaanno da 'ah oo jabka jab ka gaadhay si ay u gaaraan xoog muruq kor u kacay iyo guulo wanaagsan.
Koritaanka Tendon iyo Kahortagga Dhaawaca
Ku dhowaad jir-dhise kasta ayaa qiraya sida dhaawac gaar ahi u daahiyay horumarkiisa isaga oo ka xiray qolka jimicsiga maalmo, ama xitaa toddobaadyo. Haddii aad si joogto ah u joogtid inta badan waqtigaaga jimicsiga, dhaawacyadu waa lama huraan. Sidoo kale, kororka degdegga ah ee muruqyada oo ka dhasha kulammadaada tababarka adag, ayaa culeys badan saari kara unugyadaada oo ay ku jiraan lafaha u horseedaya dhaawacyo.
Markay noqoto hagaajinta nabarrada, xiidmaha, iyo lafaha, hormoonka korniinka ayaa muhiim ah. Adoo kordhinaya heerarka hoormoonka koritaanka, mk 677 dheelitiran waxay xaqiijineysaa in unugyada iskuxirka la hagaajiyo oo la ilaaliyo sidoo kale caafimaadka. Cufnaanta lafaha si weyn ayaa loo wanaajiyey sidaas awgeedna lafahaagu waxay ku fiicnaan doonaan adkaynta awood kuu siinaya inaad qabato tiro badan oo murqaha ah. Natiijo ahaan, kuma sii noqon doontid dhaawacyada caadiga ah.
Isticmaalayaasha badankood waxay qirayaan in mk677 ka caawiyay iyaga adkee dufanka baruurta. Mk 677 natiijooyinka luminta dufanka waxaa lagu soo warramey inay yihiin kuwo la yaab leh maxaa yeelay GH waa hoormoonka kaliya ee kaa caawin kara inaad gubto dufanka hoose iyo kan dufanka labadaba adiga oo awood kuu siinaya inaad yeelato murqaha caatada ah. Sidaa darteed, Ibutamoren marwalba waxaa lagu daraa barnaamijyada dib-u-dhiska jirka.
Maqaarka wanaagsan, ciddiyaha iyo timaha
Hormoonka koritaanka ayaa la xaqiijiyay inuu sare u qaadayo unugyada maqaarka. Tan iyo markii MK-677 uu dhaqdhaqaaqa GH, taasi waa sababta daroogada u awood u leedahay inay dib u soo nooleyso oo ay u soo nooleyso muuqaalka timaha, ciddiyaha, iyo maqaarka.
Faa'iidad kale oo ah X XXX waa in ay kiciso soo dhaweynta ghrelin oo ay sababi karto nootropic saamaynta. Sida laga soo xigtay daraasad cilmi baaris ah oo ay daabacday NCBI waxay gacan ka geysan kartaa kor u qaadista shaqada maskaxda iyadoo saameyn ku yeelanaysa laba farsamooyin si aan toos ahayn. Farsamooyinkan waxaa ka mid ah kor u qaadista IGF-1 oo gacan ka geysanaya kor u qaadista xusuusta iyo awoodda barashada. Iyo, iyada oo loo marayo kor u qaadista tayada iyo tirada hurdada REM. Hurdadu waa mid muhiim ah maxaa yeelay waxay hubisaa waxqabadka garashada ee ugu habboon.
Waxay ka hortageysaa yaraanta hoormoonka
Mk 677 wuxuu kordhiyaa IGF-1, IGFBP-3, iyo heerarka hoormoonka koritaanka ee caruurta qaba yaraanta hormoonka koritaanka iyadoon wax laga badalin uruurinta cortisol, insulin prolactin, glucose, thyroxine (T4), thyrootinpin ama triiodotyronine (T3).
Ibutamoren wuxuu muujiyay saameyn la mid ah ragga GH-liita, laakiin gulukoosta iyo insulin ayaa kordhay, sidoo kale.
Hormoonnada koritaanka waxay xoojinayaan bogsashada dhaawaca iyo dib-u-soo-cusboonaynta unugyada, sidaa darteed Mk 677 waxay ka caawisaa kuwan iyagoo kordhinaya heerarka hoormoonka koritaanka Tan waxaa taageeray warbixinnada jir-dhiska kuwaas oo adeegsaday ibutamoren kahor.
Waxay bogsiisaa kuwa murugaysan
Dadka isticmaalay MK-677 kahor waxay soo sheegaan dareen ah inay ka bogsadeen hangovers.
Kordhin rabitaanka cuntada
Ahaanshaha Ghrelin Mimetic waa inaad ka fileysaa inaad cunto badan qaadato intaad ku hoos jirto Ibutamoren. Hadday tani tahay mid faa'iido leh ama faa'iido darro ah marka loo eego yoolalkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad fahamto inay tahay mid ka mid ah natiijooyinka mk 677 aan muran lahayn.
Guud ahaan wanaagsanaanta
Ibutamoren wuxuu si weyn uga shaqeeyaa xoojinta xasaanadayada iyo fayo qabka. Awoodda jidhkaagu u leeyahay inuu la dagaallamo oo ka fogaado dhibaatooyinka xilliyeed iyo xasaasiyadda si weyn ayaa loo hagaajiyay. Waxaad bilaabi doontaa inaad ku noolaato nolol raaxo leh oo ay ka buuxdo xasiloonida maskaxda.
5. Wareegga MK-677 (Ibutamoren)
Wareegga 1: Si loo gaaro guulaha ugu wanaagsan ee MK 677 (Ibutamoren), waxaad ubaahantahay inaad kubilaabato 10mg 24 saacadood 11-ka usbuuc ee uguhoreeya ee isticmaalka kahor intaadan kudarin 20-25mg 24 saacadood kadib 12-kath toddobaad. Tan waxaa loo qaadan karaa sidii dareere ahaan, af ahaan ama kaabsal.
Wareegga 2: Waxaad sidoo kale ku bilaabi kartaa 15mg 24-kii saacadoodba waxaadna dheereyn kartaa dhererka wareeggaaga MK 677 oo ka baxsan toddobaadyada 12. Markaad sidaas sameysid, uma baahnid inaad ka walwasho dhibaatooyinka qanjirka 'pituitary gland' ama dhibaatooyinka kale ee soo raaca.
Wareegga 3: Badanaa kuwa jidh-dhiseyaasha ah ee ka soo baxa wareegga wareegga waxay doorbidaan inay kordhiyaan qiyaasta MK 677 illaa 50mg maalintii oo ay ilaaliyaan dhererka wareegga MK 677 ee siddeed toddobaad ah.
Wareegga 4: Haddii aad rabto inaad dhisto murqaha, isticmaaleyaashu waxay kugula talinayaan inay qaataan qiyaasta Ibutamoren ee 30mg 24 saacadood.
Wareegga 5: Haddii ujeeddadaada ugu weyni tahay inaad daadiso dufanka, markaa isticmaaleyaal badan oo khibrad leh ayaa soo jeedinaya qaadashada 20mg 24 saacadood.
Wareegga 6: Haddii ujeeddadaada ugu weyni tahay inaad bogsato dhaawacyada, qiyaasta MK 677 ee 10-20mg maalintiiba waa mid aad loogu taliyay.
Warka fiicani waa inaadan u baahnayn PCT (Post Cycle Therapy) mk 677 maadaama aysan faragalin wax hormoon ah.
6. Waa maxay qiyaasta MK-677 (Ibutamoren) qiyaasta ugu fiican?
Daraasaddeena iyo warbixinnada aan ka helnay isticmaaleyaasha khibrada leh waxay muujinayaan in 20mg ilaa 30mg uu yahay qiyaasta ugu fiican ee MK 677. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa soo sheegay inay qaataan wax ka badan 30mg oo ibutamoren ah maalintii, laakiin tani ma aysan keenin natiijooyin wanaagsan. Dhererka wareegga MK 677 wuxuu cadeeyay inuu ka muhiimsanyahay qiyaasta ibutamoren.
Waa muhiim inaad qaadato ibutamoren waqti dheer. Heerarka hoormoonka koritaanka waa inuu si tartiib tartiib ah jirkaaga uga dhex dhisaa. Dhisidda tartiib tartiib ah ee hormoonnada waxay qaadan kartaa dhowr toddobaad kahor intaadan xitaa bilaabin inaad dareento saameynta.
Hadafkaagu sidoo kale wuxuu go'aaminayaa xaddiga mk 677 aad u baahan tahay inaad qaadato. Waa kuwan kuwan lagu taliyey qiyaasta loogu talagalay ujeedooyin kala duwan.
Dhismaha murqaha: 30mg maalin kasta
Baruurta oo lumisa: 20mg maalin kasta
Dhaawaca dhaawaca: 10-20mg maalintii
Haddii aadan isticmaalin Budada Ibutamoren (159752-10-0) kahor, waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo 10mg si aad u aragto sida jirku uga jawaabayo.
7. MK-677 (Ibutamoren) Miyaa Lahaa Saamaynta Dhinacyada?
Mk-677 waxay leeyihiin waxyeelo aad u yar iyo yar yar haddii ay jiraanba, haddii ay dhacaanna si fudud ayaa loo maarayn karaa. Waa kuwan qaar ka mid ah waxyeelooyinka:
Isticmaalayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay u seexdaan si aan kala go 'lahayn illaa saacadaha 12 ka dib markay qaataan ibutamoren taasoo keentay dareenka daalka guud maalinta ku xigta. Haddii aad tan la kulanto, waa inaad hoos u dhigtaa qiyaasta daawada ama aad u kala dhigtaa laba jeer maalintii oo saameyntan soo socota ee MK 677 ayaa iska tagi doonta kaligeed.
In kasta oo aysan u dhici doonin dhammaan isticmaaleyaasha, isticmaaleyaasha qaarkood waxay yeeshaan muruq xanuun fudud markay qaadanayaan ibutamoren. Saameyntan MK 677 waxay sidoo kale xirmi doontaa marka aad joojiso ibutamoren.
Waxaad sidoo kale la kulmi kartaa haynta biyaha iyo rabitaanka cuntada oo kordha laakiin tani badanaa waxay kacdaa marka aad qaadatid qiyaasta ibutamoren aad u sarreysa. Waqti ka dib, dhammaan waxyeeladaan si dabiici ah ayaaba iskood iskaga tagayaan markii aad joojiso qaadashada mk 677.
8. Waa maxay nolosha nuskeed ee MK-677 (Ibutamoren)?
Nolosha nuska Mk 677 waa ku dhawaad ​​saacadaha 24. Tan macnaheedu waa aragti ahaan waa in qofku qaadan karo qaddarkiisa / keeda maalin kasta hal jeer maalintii. Laakiin waxaa la arkay in haddii aad qaadatid hal qaddar maalin kasta, heerarka hoormoonka koritaankaaga ayaa dhici kara isla markiiba.
Tan waxaa ku xigi kara dareen daal ama daal. Tan waxaa looga fogaan karaa iyadoo labada qaybood midkood loo kala qaybiyo maalin keliya ama hal cabir qaadashada ka hor intaadan sariirta aadin. Markaad sidaa yeeshid, waxaad u hurdudi doontaa sidii boqor oo wax soo saarkaaguna ma saameyn doono maalinta ku xigta oo dhan.
9. Natiijooyinka MK-677 (Ibutamoren)
Waa sax in la sheego in natiijooyinka Mk 677 ee dhisidda jirka iyo adeegsiga kale ee aan horay u soo sheegnay ay weyn yihiin. Ibutamoren waa xarun wax ku ool ah tan iyo markii ay wanaajiso dhismaha muruqyada, sidoo kale waxay ka caawisaa hagaajinta maqaarka, timaha iyo gubashada dufanka sidoo kale.
Isticmaalayaasha wadaaga Mk 677 sawirada kahor iyo kadib sawirada iyo natiijooyinka waxay muujiyeen in ibutamoren uu awood u yeeshay inuu waxbadan ka badalo qaabka jirkooda. Waxay awoodeen inay ku daraan tiro badan oo muruqyo ah iyagoo lumiyay xoogaa dufanka jirka ah.
Marka ibutamoren loo isticmaalo dhismeyaasha kale ee loo yaqaan 'SARMs like' MK-2866 iyo LGD-4033, waxay awood u leedahay inay beddesho jirkaaga gabi ahaanba, adoo siinaya natiijooyin maskaxda ku sii dhaca. Waa inaad sidoo kale ogaataa inaad ubaahantahay inaad shaqeyso oo aad ilaaliso cunnooyin sax ah haddii aad rabto inaad hesho natiijada ugu wanaagsan ee ibutamoren budada (159752-10-0) natiijada dhiska jirka.
10. MK-677 (Ibutamoren) FDA ma la oggolaaday?
Maaddaama ibutamoren uu weli yahay Dawada Cusub ee Baarista, wali ma aysan ansixin FDA. Si kastaba ha noqotee, mk 677 waxaa si tijaabo ah u isticmaalay qaar ka mid ah khubarada jir dhiseyaasha bulshada dhiska kuwaasoo qiraya in daroogadu amaan tahay. Waxaa sidoo kale si weyn u darsay saynisyahano iyaguna qirey in daroogadu waxtar leedahay.
11. MK-677 (Ibutamoren) ma amaanbaa?
Ibutamoren waa amaan haddii lagu qaato qiyaasta lagu taliyey. Gaar ahaan waa mid aad u amaan badan shaqsiyaadka caafimaadka qaba. Si kastaba ha noqotee, haddii daroogada lagu qaato qiyaaso ka sarreysa inta lagu taliyay, adeegsadayaashu waxay la kulmi karaan bararka bararka iyo murqaha. Laakiin maxaad u rabtaa inaad qaadatid qiyaaso ka sarreeya kan lagula taliyay?
Sidoo kale, saamaynta yar ee taban ee laga yaabo inay laftigaagu hoos u dhacaan marka aad joojiso isticmaalka Ibutamoren. Waxaa intaa dheer, si fudud ayaa loo maareyn karaa xitaa marka la isticmaalayo daroogada.
12. MK-677 (Ibutamoren) sharci ma tahay in la iibsado?
Dadka badankood waxay isweydiiyaan, miyuu iibiyaa MK 677? Haddii aad ka mid tahay, ha walwelin, waxaan uga jawaabi doonnaa su'aasha halkan.
Waqtigaan, budada MK-677 (159752-10-0) ayaa kaliya loo heli karaa iibinta sida daroogada cilmi baarista ah, sidaa darteed aragti ahaan, way adag tahay in la helo daroogada haddii aad tiraahdid waxaad u dooneysaa jir dhis. Si kastaba ha noqotee, inta badan kuwa jirka dhisa waxay sheeganayaan inay u iibsanayaan cilmi baarista kaliya ay u sababeeyaan iibsigooda. Kahor intaadan gujinin 'MK 677 ka iibsato badhanka', hubi in alaab-qeybiyeha aad iibsaneyso uu yahay mid sharci ah oo xalaal ah. Waa inaad hubisaa inaad iibsaneyso nooca ugufiican ee daroogada sababta oo ah nooca aan nafaqada lahayn ee nafaqada leh ayaa laga yaabaa inay la kulanto dhibaatooyin daran.
13. MK-677 (Ibutamoren) Loogu talagalay Dhismaha Jirka
Ibutamoren wuxuu dhawaanahan caan ku noqday bulshada dhiska. Sababta ugu weyn ee mk677 nutrobal si weyn loogu adeegsado dhismaha muruqyada ayaa loogu talagalay ujeeddada kor u qaadista heerarka GH. Qof kasta oo ku jira dhismaha jirka marwalba wuxuu rajeynayaa inuu noqdo midka ugu caansan uguna weyn.
Maaddaama hormoonnada korniinka ay door weyn ka ciyaaraan dhismaha jirka, waxay rabaan inay ku jiraan heerar sare intii suurtogal ah iyagoo aamin ah. Heerarka sare ee hormoonnada koritaanka, dhaqsaha iyo fududahay dhisme-dhiska ayaa awood u leh inuu ku daro muruqyo dheeri ah.
Maaddaama Kobaca Hormoonnada ay yihiin kuwo aad qaali u ah ma jiraan xalal kale oo jeebka ku habboon oo lagu kobciyo hormoonka koritaanka, marka laga reebo Nutrabol. Mk 677 waa si aad u jaban marka loo eego HGH (Hormoonka Koritaanka Aadanaha) wuxuuna si hufan u dardargalin karaa heerarka hormoonka koritaanka aadanaha illaa xad weyn.
Waad ku sameyn kartaa amar weyn oo loo yaqaan 'MK-677' ka badan khadka tooska ah. MK 677 iibku waa sharci ahaan sida kiimikada loogu talagalay cilmi baarista. Waxaad sidoo kale arki doontaa bodybuilders badan oo iibsada ibutamoren oo sheegta inay tahay isticmaal cilmi baaris oo keliya.
Waxa kale oo muhiim ah inaad ogtahay in nafaqada marwalba la isku dhejiyo SARMs. Tusaale fiican waa isku darka S23, MK-677, iyo RAD140 (Testolone) budada.
Maktabadda Qaranka ee Caafimaadka, Machadyada Qaranka ee Caafimaadka, Ralf Nass, Suzan S. Pezzoli, Mary Clancy Oliveri, James T. Patrie, Frank E. Harrell, Jr., Jody L. Clasey, Steven B. HeymsfieldMark A. Bach, Mary Lee Vance, iyo Michael O. Thorner, MB, BS, D.Sc, Saamaynta Oral Ghrelin Mimetic ee Iskuxirka Jirka iyo Natiijooyinka Kliinikada ee Dadka Waaweyn Caafimaadka Qaangaarka ah: Nooc la soo saaray, oo la xakameeyay.
Janssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. Iskeelka muruqyada iyo qaybinta 468 rag iyo dumar ah oo da'doodu u dhaxayso 18-88 yr. J Appl Physiol. 2000; 89: 81-88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y.,. . . Papanicolaou DA (2011). MK-0677 (ibutamoren mesylate) ee loogu talagalay daaweynta bukaanada ka soo kabanaya jabka jabka: daraasad badan oo kala-duwan, kala-soocid ah, xakameyn ku-meel-gaar ah ah. Arkiifiyada cilmiga Gerontology iyo Geriatrics, 53 (2), 183-189.
10 Steroids Ugu Caansan ee Anabolic-ka ah Matoor Fikradaha khaldan ee sida caadiga ah looga helo steroids anabolic-ka adduunka